Fahatsiarovana ny Taombaovao any Los Angeles
Fandaharam-potoan'ny Taombaovao Sinoa sy Vietnamiana 2017 - Taonan'ny Monkey
Ireto misy toerana manodidina an'i Los Angeles sy Orange County izay ahafahanao mankalaza ny Taombaovao Sinoa sy ny Taom-baovao Vietnamiana. Ny taona vaovao volana ho an'ny 2017 dia manomboka ny 28 Janoary ary hikotika ny taona ho an'ny Rooster izahay.
Taom-baovao taombaovao tany Disney Adventure Adventure
Ny Disney California Adventure dia hosoloina amin'ny lanonana miloko sy sora-baventy amin'ny teny Anglisy, Shinoa, Koreana ary Vietnamiana izay maniry vahiny ho Happy New Year.
Hisy fampisehoana azo itokiana avy amin'ny mozika Shinoa, Koreana ary Vietnamiana sy mpandihy ary koa sakafo manokana ho an'io fotoana io. World of Color dia hanasongadina ny "Hurry Home - New Year Celebration", miaraka amin'i Mulan sy Mushu.
Rehefa: 20 Janoary - 5 Febroary 2017, 11 maraina - 5 ora alina
Aiza: Disney California Adventure
Taom-baovao Sinoa tao amin'ny trano famakiana Citadel
Tahaka ireo toeram-pivarotana goavana hafa ao amin'ny faritra LA, ny Citadel Outlets ao amin'ny Tanànan'ny varotra dia hankalaza ny Taombaovao Shinoa miaraka amin'ny mpanolotra kofehy mena mandritra ny roa herinandro. Hanampy sarimihetsika fanampiny izy ireo amin'ny asabotsy 28 janoary.
Rehefa: 20 Janoary - 11 Febroary 2017
Aiza no misy: Citadel Outlets, 100 Citadel Drive, Suite 480, Los Angeles, CA 90040
Fetiben'ny Taombaovao Sinoa tany Monterey Park
Ny Floral Fair dia manasongadina ny fikarakarana voninkazo, sakafo, fialamboly, zavakanto sy asa tanana ho an'ny sokajin-taona rehetra sy ny karnavalo.
Rehefa: 21-22 Janoary 2017, Sat 10 am - 9 ora alina, Masoandro 10 am - 7 alina
Aiza ny: Garvey Avenue eo Ramona sy Alhambra Avenues, Monterey Park
Fiarandalamby: Hahazo fiarandalamby telo avy amin'ny fiarandalamby.
Taom-baovao Sinoa tany Beverly Hills
Ny hetsika fankalazana ny Taombaovao amin'ny taona faha-6 faha-6 an'i Beverly Hills dia haneho ny famokarana manerantany amin'ny fampisehoana iraisam-pirenena avy any Beijing.
Ny fisokafana dia misokatra ho an'ny besinimaro, na izany aza, ny famandrihana ny fisidinan'ny dina dia tsy maintsy mandoa. Ny tapakila dia maimaim-poana, ary ny $ 6 amin'ny fandoavam-bola amin'ny saram-pandaharana
Rehefa: 21 Janoary 2017, 8 alina hariva
Taiza: Saban Theater, 8400 Wilshire Blvd, Beverly Hills, CA 90211
Cost: Free, $ 6 saran-dalana,
Fiara mivezivezy : Mijanona eny an-dalambe na mandoa vola any amin'ny faritra, Information momba ny fiara
Taom-baovao mahazatra tao amin'ny Universal Studios Hollywood
Ny Universal Studios Hollywood dia hankalaza ny Taom-baovao Lunar sy ny "Taonan'ny Pendrer" miaraka amin'ny endriky ny teny sinoa, ny ankamaroan'ny tarehimarika manjavozavo amin'ny akanjo nentim-paharazana Shinoa ary MEGATRON midina mandarin amin'ny 12 metatra avy amin'ny " Transformers: The Ride-3D" manazava sary amin'ny mpitsidika. George ho tia ihany koa dia hanao fitafiana ho an'ny taombaovao. Ny dikan-teny Mandariny amin'ny Studio famous Tour dia manolotra ny taona.
Rehefa: 21 Janoary - 5 Febroary 2017
Aiza: Universal Studios Hollywood
Cost: Ny fankalazana ny taombaovao amin'ny volana lota dia tafiditra ao amin'ny vidin'ny Admission amin'ny Universal Studios Hollywood
Torolalana ho an'ny mpitsidika Hollywood Universal Studios
Fetiben'ny Taom-baovao amin'ny alàlan'ny LA Waterfront
Ny Port of Los Angeles no mitazona ny fankalazana ny Taom-baovao Lunar amin'ity taona ity amin'ny trano famokarana varotra CRAFTED.
Ny tolakandron'ny mpandihy folk, dragona sy liona dancers, asian-akanjo sy sakafo.
Rehefa: 21 Janoary 2017, 2-7 hariva
Taiza: NANTSOINA tao amin'ny Port of Los Angeles, Warehouse # 10, 112 E 22nd St, San Pedro, CA 90731
Taom-baovao nentin-drazana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Tempolin'i Thien Hau any Chinatown
Ny hariva amin'ny taom-baovao, ny Tempolin'i Thien Hau ao Chinatown ao afovoan-tanàna LA dia hanokatra ny fetin'ny taom-baovao amin'ny alim-borona, ny moanista Taoista sy bodista, dragona dancers ary 550.000 mpamono afo.
Rehefa: Zoma 27 Janoary 2017, 10 alina ka hatramin'ny 12 maraina
Aiza: Tempolin'i Thien Hau, 750-756 N Yale St, Los Angeles, CA 90012
Fiarandalamby: Fipetrahana an-jaridaina eny an-kianja, mandoa vola any anaty trano kely
Metro: Lalana volamena mankany amin'ny Chinatown Station, na mandeha lavitra be avy amin'ny Station Station .
Tet Festival any Costa Mesa
Ny Fetiben'ny Tet lehibe indrindra ao Orange County, tohanan'ny Union of Student Associations Studies of Southern California, dia miverina amin'ity taona ity any amin'ny Fairgrounds any Costa Mesa. Ny fety dia ahitana mpandihy dragona, lahatsary, fialamboly, fiara, sakafo ary trano fambolena.
Rehefa: ny 27-29 Janoary 2017, ny Fr 4-10 ora, ny 11 ka hatramin'ny 10 ora alina, ny Masoandro 11 maraina - 9 alina
Aiza ny: OC Fair & Event Center, 88 Fair Drive, Costa Mesa, CA
Sarany: $ 6 amin'ny vavahady na amin'ny aterineto.
Sarobidy: $ 8
Taom-baovao Sinoa tany Santa Monica Place
Ny foiben'ny fandevenana ao Santa Monica Place ao Santa Monica dia hanolotra fankalazana ny Taombaovao Sinoa nentim-paharazana niaraka tamin'ny Lion Dancers nentim-paharazana, Koreana Fanihy, mozika, zavakanto sy sakafo ho an'ny ankizy.
Rahoviana: 28 Janoary 2017, 2-6 alina
Where: Santa Monica Place, 395 Santa Monica Place (NOT Blvd), Santa Monica, CA (sisintany Broadway sy Colorado eo anelanelan'ny 2nd and 4th Street
Golden Dragon Parade sy Fetiben'ny Taombaovao Sinoa any Chinatown
Fetin'ny Taom-baovao Sinoa ao amin'ny Chinatown LA miaraka amin'ny Golden Dragon Parade ny Sabotsy.
Rehefa: 4 Febroary 2017, Golden Dragon Parade, Alatsinainy 1 hariva, Fivoriambe ora amin'ny 8 ora hariva.
Aiza: ny lalana mankany Parade dia mianavaratra amin'ny Havoanan'i Ord na Bernard, ary mianatsimo mankany amin'ny Broadway mankany Cesar Chavez. Fialan-tsasatry ny Fihaonan'ny Route Parade manodidina ny Central Plaza, 943-951 N. Broadway.
Sarany: Afaka mijery avy eny an-dalambe, $ 25 grandstand tickets disponib, fety malalaka.
Metro: Lalana volamena mankany amin'ny Chinatown Station, na mandeha lavitra be avy amin'ny Station Station.
Info: www.lagoldendragonparade.com na chinatownla.com
OCTA Lunar vaovao fankalazana
Ny Orange County Transit Authority dia mamoaka ny fankalazan'ny New Lunar New Year ny marainan'ny misiônera ao Irvine Metrolink ary manome ny tapakila Metrolink maimaim-poana any amin'ny Station Union mba hanatrika ny Chinatown Golden Dragon Parade ho an'ireo olona 100 voalohany izay miseho. Ny zava-nitranga tao Irvine dia ahitana liona, fofona ary lamosina nentim-paharazana handrindrana sy hahazo loka.
Rehefa: 4 Febroary 2017, 8 ora maraina.
Aiza ny: Station Irvine, 15215 Barranca Parkway, Irvine, CA 92618.
Fetin'ny Taom-baovao Sinoa ao amin'ny Huntington Library
Ny mozika nentim-paharazana Shinoa, dihy, fombafomba ara-batana sy sakafo dia haka ny Tranobe ao Huntington akaikin'i Pasadena. Hisy ihany koa ny fampisehoana an-tsary sy ny sary hosodoko ary ny maro. Ampidirina amin'ny fidirana matetika.
Rehefa: 4-5 Febroary 2017, 10 maraina - 5 alina
Aiza ny: Library and Gardens Huntington,
Sarany: $ 25 olon-dehibe, $ 21 zokiny sy mpianatra 12-18 na miaraka amin'ny ID, $ 10 ankizy 4-11, afaka 4 taona
Tsidiho ny fitsidihana ny Bibliotheca Huntington
Mpanafika mpitaingin-tsoavaly nanerana an'i Chinatown ho an'ny ekipa roa na efatra.
Rehefa: 5 Febroary 2017, Alahady 11 maraina
Aiza: Chinatown, manomboka ny toerana nomena amin'ny fisoratana anarana.
Metro: Lalana volamena mankany amin'ny Chinatown Station
Fetin'ny Taom-baovao ho an'ny Taom-baovao ao amin'ny tranom-bakin'ny Bowers
Fetibe maimaim-poana miaraka amin'ny zavakanto, asa tanana, sakafo, mozika ary dihy ao amin'ny tokotanin'ny museum an'ny Bowers sy Kidseum any Santa Ana.
Rahoviana: 5 Febroary 2017, 11-3: 30
Aiza ny: Bowers Museum Kidseum, 2002 N. Main St, Santa Ana, CA 92706
Cost: Free Courtyard, Museum $ 15 olon-dehibe, mpianatra 12 sy zokiolona, ​​ankizy maimaim-poana 12 taona; Kidsa, $ 6 taona 2 sy ambony. Ny fahalalahana rehetra ho an'ny mponina ao Santa Ana sy ny mpikambana.
Fiarandalamby: $ 6 ao amin'ny tranom-bakoka, fiara fitateram-bidy voafetra sy malalaka.
Bebe kokoa ao amin'ny tranom-bakoka Bowers
Alhambra Lunar New Year Fankalazana
Ny fankalazana nentim-paharazana ao an-tanànan'i Alhambra dia manana tanàna dimy ao amin'ny distrika ara-barotra Shinoa manerana ny Valley Blvd avy any Garfield mankany Almansor. Trano fivarotana an-jatony, asa tanana, atrikasa momba ny ankizy, fampisehoana ara-kolotsaina, fiarandalamby fiarandalamby dragona, lalao sy sakafo mahasarika olona marobe.
Rehefa: ny 11 Febroary 2017, 10 maraina - 5 alina
Aiza avy: Valley Blvd, avy any Garfield mankany Almansor, Alhambra, CA
Ny Fetiben'ny Lanin'ny Amerikana Sinoa any amin'ny Lalana Olvera
Fialam-boly mivantana, anisan'izany ny mpandihy liona, akrobatika, mozika, ary dihy, asa atrikasa fampiasa an-dakozia ary fidirana malalaka mankany amin'ny Museum Amerikana Shinoa .
Rehefa: 4 martsa 2017 (Hohamafisina), amin'ny mitataovovonana - amin'ny 7 ora hariva
Aiza: 425 Lalana Los Angeles ao amin'ny El Historic Site / Olvera Street
Fiarandalamby: Miankina betsaka amin'ny faritra
Metro: Station Station
Shen Yun: Mampifandray ny lanitra sy ny tany ny zavakanto
Ity famelabelaran-kolontsaina Shinoa any New York ity dia manerana an'i Los Angeles isan-taona miaraka amin'ireo mpandihy, mpihira ary akrobatsa mahavariana miaro ny kolontsaina, izay voarara ao Shina.
Rahoviana: 24 Martsa-23 Aprily 2017
Aiza: Long Beach, Thousand Oaks, Hollywood, Claremont, Costa Mesa, San Luis Obispo ary Santa Barbara.
Cost: $ 70- $ 200
Ny fampahalalana dia marina amin'ny fotoana famoahana azy. Azafady azafady ny tranonkala fisehoan-javatra momba ny vaovao farany.
Fidirana an-dalan'ny fianankaviana ao Los Angeles
Trano fandraisam-bahiny nataon'i Frank Lloyd Wright
Ny tranombakoka bateran'ny kolontsaina
Fomba hakana Hollywood Studio Tour
Long Beach Bars - Street 4
Top 10 Free Melbourne Sehatry ny fahalianana
Webcams manerana an'i Reno sy Farihy Tahoe
Katedraly nasionalin'ny Krismasy 2017
Toerana tsara indrindra ahafahana mamakivaky an'i Tacoma
Isla Nena Café: Bar der Vieques miaraka amin'ny seranam-piaramanidina manokana
Mandany ny volana Jolay any Aostralia
Ivon-toeran'ny Civic Walking Tour tao Denver
Mampiasa ny karatry ny fidiranao any ivelany
Zip Kòd an'ny County Nassau, Long Island, New York
10 Zava-tsarobidin'ny Top Africa Africa Bucket List